ကျောက်ကပ် function ကိုတိုးတက်စေရန်5အစားအစာများ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သဘာဝကကုစား "5 အစားအစာများကျောက်ကပ် function ကိုတိုးတက်လာဖို့ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
လောလောဆယ်နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါအဓိကကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဒီမှာသင်သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပါဝင်သောသင့်ရဲ့ကျောက်ကပ် function ကို, တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီနိုငျသောအစားအစာများစာရင်းတစ်ခုတင်ပြဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ကြည့်ရှုရန်:5အဝလွန်ခြင်းအမျိုးအစားများနှင့်၎င်း၏အကြောင်းတရားများ
ကျောက်ကပ် function ကိုတိုးတက်လာဖို့ကူညီသစ်သီးများ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အစားအစာရောဂါ၏တိုးတက်မှုနှေးကွေးကူညီခြင်းနှင့်ဤရောဂါများနဲ့ဆက်စပ်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နိုင်သည်ကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုများဖြစ်ကြသည်။
ကျောက်ကပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရေးပါတဲ့စည်းမျဉ်း function ကိုရှိသည်: ဤအကိုယ်တွင်းအင်္ဂါစွန့်ပစ်ဖျက်သိမ်းရေးတာဝန်ရှိသည်။ ထိုအသွေးထို့ကြောင့်အဆုံးစွန်အားဖြင့် filtered ဤသို့သူတို့ဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရဖို့တ္ထုများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်တာဖြစ်ပါတယ်ကျောက်ကပ်မှတဆင့်ဖြတ်သန်းပါတယ်။ ထို့အပြင်ဤအလောင်းများကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်အရည်များနှင့် electrolytes တွေထိန်းညှိ။
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပြင်းထန်ကျောက်ကပ်ရောဂါခံစားနေရသည့်အခါကသူမ၏ကျောက်ကပ်စနစ်တကျဖော်ပြထားသောအမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်မဟုတ်ဆိုလိုသည်။ လူနာသူတို့ရဲ့အစားအသောက်ကိုထိန်းချုပ်ရပါမည်အဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ (အရည်နှင့်အစားအစာထုတ်ကုန်) ။
ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ function ကိုတိုးတက်စေရန်မိမိအအစားအစာကိုပြောင်းရိုးရှင်းစွာကျန်းမာထောက်ခံချက်မဟုတ်ပါဘူးဤသည်ဆေးဝါးများနှင့် Dialysis နှင့် တွဲဖက်. ကုသမှု၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
သင့်လျော်သောအစာအာဟာရရောဂါ၏သင်တန်းပြင်ပေးရန်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောဆီးချို, သွေးတိုးရောဂါဒါမှမဟုတ်အဝလွန်အဖြစ်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ function ကိုနှင့်ဆက်စပ်သည်အခြားရောဂါများပေါ်ပေါက်လာကာကွယ်တားဆီးဖို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
ဤဆောင်းပါး၏ကျန်ရှိသောတှငျကြှနျုပျတို့ကျောက်ကပ် function ကိုတိုးတက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီငါးသစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုတင်ပြ။
1 ။ escarole
Escarole လည်း escarole ကိုခေါ်, သူတို့ရဲ့ကျောက်ကပ် function ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လိုသောလူတို့အဘို့အရသာဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်ကဒီဖြစ်ပါသည်: ဒီအစားအစာကိုမြင့်မားသောရေအကြောင်းအရာနှင့်အနိမ့်ကယ်လိုရီရှိတယ်.
ထို့အပြင်, ရေ, ဖွဲ့စည်းမှု၏ 95% အနီးကအလင်းအစားအစာကြောင်းကိုဤအရပ်မှအဆိုပါအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မြင့်မားတဲ့ဖိုင်ဘာအကြောင်းအရာကိုလည်း satiating အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။
၎င်း၏အမြင့်ဆုံးရေအကြောင်းအရာအပြင်, escarole သတ္တုဓာတ်အတွက်အထူးသဖြင့်ပေါကြွယ်ဝသည်နှင့် ဗီတာမင်။ အရေးကြီးဆုံးများထဲတွင်ကယ်လစီယမ်, ဖော့စဖောရက်, သံ, ပိုတက်စီယမ်နဲ့ဆိုဒီယမ်ပါဝင်သည်။ ဗီတာမင်နှင့် ပတ်သက်. နှင့်အတူ, escarole ဗီတာမင် A, ဗီတာမင် C နဲ့ B ကိုဗီတာမင်ကြွယ်ဝဖြစ်ပါသည်
2 ။ ကြက်သွန်နီနှင့် shallots
ဤရွေ့ကားဟင်းသီးဟင်းရွက် gastronomy ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အစားအသောက်အတွက်ပါတဲ့လူသုံးအများဆုံးအကြားရှိပါတယ်။ အလွှာအပြီးအလွှာကြက်သွန်နှင့် shallots အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ function ကိုနှင့်စပ်လျဉ်း ဤသူကား စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းကြောင်း၎င်းတို့၏ခိုင်မာတဲ့ Diuretics ဆီးဤအစားအစာများဆီးထုတ်ပယ်ခြင်းမြှင့်တင်ရန်။ ပေါင်းလဒ်ခုနှစ်, ကြက်သွန်နှင့် shallots အားကြီးသောရှင်းလင်းမှုပါဝါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေးများအတွက်စံပြအင်္ဂါရပ်ရှိသည်။
အဆိုပါထုတ်ဝေတစ်ဦးကသိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှု ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစားနပ်ရိက္ခာများဂျာနယ် ကျောက်ကပ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလက်ရှိအရည်၏ဖယ်ရှားရေးရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ထိရောက် activation ကိုရည်မှတ်ကြက်သွန်အရည်အသွေးတွေကိုမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြု။
ကျွန်တော်အထက်တွင်ပြောခဲ့သကဲ့သို့, သူတို့ရဲ့စင်ကြယ်စေအရေးယူသူတို့ရဲ့သာသီလမဟုတ်ပါဘူး။ ဤရွေ့ကားအစားအစာများကိုများစွာသောအခြားအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်။ သူတို့:
3 ။ အဆိုပါမုန္လာဥနီ
အဆိုပါမုန္လာဥနီမျက်စိကျန်းမာရေးကိုယင်း၏အကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်လူသိများနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤသည်၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောကျင့်သိက္ခာကိုမဟုတျပါဘူး: အမုန္လာဥနီအများအပြားသတ္တိလည်းရှိတယ်။
ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ function ကိုနှင့်စပ်လျဉ်းဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ Diuretics ဆီးအာဏာအရေးကြီးပါသည်။ ယခင်အစားအသောက်လိုပဲ la မုံလာဉဝါ အလှည့်များတွင်ကျောက်ကပ်ကျောက်ပြိုကွဲခွင့်ပြုထားတဲ့ဆီး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ထုတ်ပယ်ခြင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်သောမြင့်မားသောရေအကြောင်းအရာ, ရှိပါတယ်.
နှင့်အမြင်အာရုံကျန်းမာရေးကိုပြန်သွားပါကမုန်လာဥကျွန်တော်တို့ရဲ့ရူပါရုံကိုတစ်ခုမဟာမိတ်ဖြစ်ကြောင်းမှန်သည်။ ဒီဒဏ္ဍာရီနောက်ကွယ်ကမုန္လာဥနီ၏အနှစ်သာရတည်ရှိသည်: ဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်အတွက် beta-carotene ပစ္စုပ္ပန်သူတို့အရွယ်မတိုင်မီအိုမင်းတားဆီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစွမ်းထက်မဟာမိတ်များဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကမြင်လွှာကာကွယ်ပေးရန်နှင့်မျက်စိအတွင်းတိမ်တားဆီးနိုင်အောင်မုန်လာဥကိုစားကြလော့။
4 ။ blueberries
သူတို့ရဲ့အရသာအရသာအပြင်, blueberries ဆီးကျေးရွာအုပ်စုများအတွက်ပိုးသတ်ဆေးတက်ကြွပြီးပြည့်စုံသောဆံ့။ အဆိုပါ blueberries ဒါကြောင့်ရောဂါကူးစက်မှုတိုက်ခိုက်နေများအတွက်စံပြဖြစ်ကြောင်းနှင့်အရံစောင်ရေတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။
အနီရောင်ဘလူးဘယ်ရီသီးဖျော်ရည်အားအံ့သြစရာပိုးသတ်ဆေးနှင့် UTI ဖြစ်စေတဲ့ဘက်တီးရီးယားအပေါ်ပဋိဇီဝဆေးရှိပါတယ်အဆိုပါဘက်တီးရီးယားများအပါအဝင် Escherichia coli.
ထို့အပြင်ခုနှစ်, blueberries အဆိုပါဆံ့quinic အက်ဆစ်ဒါကြောင့်ဖယ်ရှားခံရသည့်အခါဆီး acidifies ရာတစ်ဦးကပစ္စည်းဥစ္စာ။ ဤသည်အက်ဆစ်ကျောက်ကပ်ကျောက်များ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းတားဆီးဤသို့ဆီးကျောက်များကာကွယ်တားဆီးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ်။
တိုတောင်းခုနှစ်, blueberries ကျောက်ကပ် function ကိုတိုးတက်စေရန်တစ်ဦးစံပြအသီးဖြစ်ကြ၏။
5 ။ ကျောက်ကပ် function ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်သောအခြားအစားအစာများ
ဒီဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားတဲ့သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဝေးသူတို့ရဲ့ကျောက်ကပ် function ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လိုသောလူတို့အဘို့အကြံပြုတစ်ခုတည်းသောအစားအစာကနေဖြစ်ကြသည်။
အဘယ်သူ၏ဂုဏ်သတ္တိများကျောက်ကပ် function ကိုများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့များမှာအများအပြားအခြားသူများကဲ့သို့သောရှိပါတယ်:
ကျောက်ကပ်နှင့်ဆီးအိမ်ဟာဆီးစနစ်၏အခြေခံဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းထိုအသွေးထဲကနေ filtered စွန့်ပစ်ပပျောက်ဖို့အသည်းနှင့်အတူပြုမူ။ Read more »
နီကိုတင်းဖို့စွဲဆန့်ကျင်3ကသဘာဝကုထုံး - Improve သင့်ရဲ့ကနျြးမာရေး